हाम्रो समाजमा अधिकांस मान्छेहरु किन अरुको चाकडी गर्छन् ? - Himali Patrika
हाम्रो समाजमा अधिकांस मान्छेहरु किन अरुको चाकडी गर्छन् ?
हिमाली पत्रिका १२ फाल्गुन २०७६, 8:55 am
हाम्रो समाजमा सबैभन्दा बढी सलबलाउने भनेकै चाकडीबाज हुन् । किनभने हाम्रा ठूलाबडाहरुले नै चाकडी-संस्कारलाई गोडमेल गरिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा त झन् चाकडी नगर्नेको भविष्य नै छैन।
चाकडी गर्नेहरु कामचोर हुन्छन् । उनीहरु चाकडीकै भरमा अरुलाई रिझाउने, भुलाउने मनोवृत्तिका हुन्छन् । यस्ता चाकडीबाजले आफ्नो काम फत्ते भइसकेपछि धोका दिन सक्छन् । उनीहरु आफैप्रति विश्वस्त हुँदैनन् । अरुलाई विश्वास गर्दैनन् । अनलाइन खबरबाट